FlowCon rivotra diffusers amin'ny rivotra POWERFLOW fiaramanidina lehibe azo ampiasaina ho an'ny maro samihafa ny fampiharana. Tena mahomby izy ireo amin'ny entrapping sy fampifangaroana rivotra. Ny ela mitora-manidina fiaramanidina amim-pahombiazana dia afaka manosika ny rivotra mafana tany mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any amin'ny faritra. Ny Lamesa sy ny velocity ny fiaramanidina mety rivotra hivezivezy 10'-40 'etỳ an-dafin'ny Diffuser. Tamin'ny FlowCon POWERFLOW Diffuser mifandray amin'ny rivotra makiazy vondrona, ny Narahi-rivotra azo voaely mitovy orinasa mpamokatra entana lehibe mihoatra ny faritra. Mba hamonjy ny angovo, unheated rivotra azo mivantana ambony mba miara valin-drihana rivotra mafana amin'ny ririnina ary avy eo dia midina ho ventilate Nahitsiny ny faritra miasa amin'ny vanin-taona mafana. Mpankafy sy FlowCon POWERFLOW diffusers fotsiny dia afaka ampiasaina mba hitsoka rivotra mafana valin-drihana midina mba miara rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any rihana. Angovo tahiry dia mety ho Mitana. Amin'ny mafana-piasana, hivezivezy rivotra tsotra dia afaka hanatsarana famokarana. Large POWERFLOW rivotra fiaramanidina azo stratejika napetraka miaraka amin'ny Diffuser ny asa tsirairay ventilate-peo. PowerFlow lamba rivotra ducts hamonjy evaporative tony rivotra midina amin'ny alalan'ny seranan-tsambo lehibe. PowerFlow rivotra fiaramanidina miainga amin'ny 1 "ny 6" ny savaivony. Fampiharana dia ahitana tolo-kevitra; indostria, warehousing, sy ny faritra orinasa mpamokatra entana, Gyms, Pools, Varotra, Grocery fivarotana, ary trano vonjimaika.
10 Oz. Vinyl mifono polyesterHigh Temperature Poly Duct polyester - antibiotika Polyethylene
Grocery Stores Gyms Industrial Manufacturing Faritra Pools
Air Jet Plugs Condensate tatatra Manaova tady Fabric Damper Fittings anaty Ny Cap
Zipper sy ny Velcro Connections
Polyethylene dia tsy voahozongozona ny ankamaroan'ny zavatra simika, ary hitsangana ny ankamaroan'ny poti niteraka rivotra. Izany dia kivy mafana ny 180 ° F ary azo diovina amin'ny alalan'ny dipoavatra Hose nozzle sy ny borosy. Polyethylene ny afo, ary nihaona tamin'i ASTM retardant E-84 Taona faha-1, AC 167, 1005. LC ICC-ES tatitra: ESR-2646.
polyester dia Premium kilasy mifono lamba. Izany dia kivy mafana ny 350 ° F ary azo laundered amin'ny fizarana kely. Polyester dia afo retardant nihaona ASTM E-84 Taona faha-1, AC 167, 1005. LC ICC-ES tatitra: ESR-2646.
* Mba manokana ihany.
polyester dia Premium kilasy uncoated lamba miaraka amin'ny mpandraharaha antibiotika. Izany dia kivy mafana ny 350 ° F ary azo laundered amin'ny fizarana kely. Polyester dia afo retardant, nihaona tamin'i ASTM E-84 Taona faha-1 ary voasokajy araka ny Ul.
10 Oz. Vinyl mifono polyester
vinyl dia mifono lamba izay hitsangana ho tena niteraka poti rivotra. Izany dia kivy mafana ny 180 ° F ary azo diovina amin'ny alalan'ny dipoavatra Hose nozzle sy ny borosy. Vinyl ny afo, ary nihaona tamin'i ASTM retardant E-84 Taona faha-1.
XStatic dia manohitra ny voasakantsakan'ny mifono lamba izay manasongadina ny antibiotika mpandraharaha. Izany dia kivy mafana ny 250 ° F ary azo laundered amin'ny fizarana kely. XStatic ny afo, ary nihaona tamin'i ASTM retardant E-84 Taona faha-1.
Temp Fiberglass avo
avo Temp Fiberglass dia mifono lamba fiberglass izay manasongadina ny kivy mafana 500 ° F. Mety azo ampiasaina ho an'ny fampiharana hafa. Ny fiberglass dia mifono ary afaka manana fiaramanidina rivotra. Temp avo fiberglass dia afo retardant, nihaona tamin'i ASTM E-84 Taona faha-1 ary voasokajy araka ny Ul.
Tariby fihenjanana ara-toekarena no tena safidy. Azo diameters rehetra, na reny tokan-tariby hatramin'ny 30 "savaivony, ary avo roa heny hatramin'ny 48" savaivony ary telo mihoatra noho izany. Snaphooks dia fizarany tamin'ny 36 "toerana sy ny misy amin'ny plastika, Stainless vy. Cable Misy amin'ny nandrisika, Stainless vy, sy vinyl mifono. Ny rafitra dia ahitana ny tariby (3/16 "savaivony), turnbuckle, eyebolts sy ny tariby clamps.
New Halo fihenjanana rafitra fampiatoana (HTS) manome ny toetoetry ny rafitra Diffuser FlowCon ho inflated rehefa fikirakirana ny rivotra rafitra eny. Io safidy dia azo ampiasaina amin'ny toerana iray tariby tsotra fampiatoana na ny tokan-tena HD lalamby hitandrina ny FlowCon Diffuser mitady inflated tsy airflow. Voafetra from 10 "ny 36" savaivony, izany safidy tanteraka ny fampiharana izay Diffuser deflated tanana teo no olana. Fizarana Mora ho voasambotra izy ka nanasa tsy misy asa fanampiny. Anisan'ny singa iray fitsipika laharana fihenjanana tariby na ny tokan-tena lalamby HD rafitra.
New HD anodized aluminium lalamby no Premium rafitra lalamby. Malama tsara tarehy manantena ny rafitra Diffuser FlowCon lamba. Azo diameters rehetra, na reny tokan-dalamby hatramin'ny 30 "savaivony, ary avo roa heny hatramin'ny 48" savaivony ary telo mihoatra noho izany. Gliders dia fizarany tamin'ny 36 "toerana sy ny misy amin'ny plastika. Ny rafitra dia ahitana HD fiarandalamby, lalamby fanohanana, couplers, ary mitsangana fanohanana (hafainganam-pandeha rohy). Rayon bends misy ny hihaona kiho rayon.
Manaraka: Micro Flow Fabric Duct
Air lamba Duct
Air rivotra malefaka Duct
Ombilahy Kely Barn Air Duct
Vovoka fitrandrahana Duct
fampirantiana Center lamba Air Duct
Fipoahana Porofo malefaka Duct
afo mahatohitra lamba Duct
afo mahatohitra malefaka Duct
malefaka Air Ducting
malefaka Air Ducts
malefaka HVAC Duct
Sakafo Industry lamba Air Duct
Fume fitrandrahana malefaka Duct
akanjo Indostria lamba Air Duct
ny antsasany Round HVAC Duct
HVAC Voaro Duct
Voaro malefaka Air Duct
Voaro malefaka Vent Duct
Perforated malefaka Duct
mahitsizoro tarafin'ny malefaka Duct
Round malefaka Air Ducting
manasa Circle Fabric Duct
manasa Circle Fabric Ducting
manasa Round Fabric Duct
manasa Round Fabric Ducting
Sports lamba Air Duct
fivarotana lehibe lamba Air Duct
Textile malefaka Duct
Textile Industry lamba Air Duct
mafana Ary Acoustic Duct
rivotra Air Duct
rivotra malefaka Duct
Warehouse lamba Air Duct
Address: Building B6, Lingang No.1 Road, Huangdao District, Qingdao, Sina, 266500